Inter Milan oo City, Chelsea & Arsenal ka afduuneysa Aguero, Costa & Sanchez Xili Persic uu ku biirayo Koox London ka dhisan | Laacibiin.net
Home » Horyaalada » Premier League » Inter Milan oo City, Chelsea & Arsenal ka afduuneysa Aguero, Costa & Sanchez Xili Persic uu ku biirayo Koox London ka dhisan
Inter Milan oo City, Chelsea & Arsenal ka afduuneysa Aguero, Costa & Sanchez Xili Persic uu ku biirayo Koox London ka dhisan	Kooxda Inter Milan ayaa dagaal ugu jirta saxiixa Alexis Sanchez ama Sergio Aguero laakiin Chelsea ayaa lacag waali ah ku dalban doonta garabka kooxdaas Ivan Perisic.
Kooxda Nerazzurri oo ay hantiyeen milkiilayaal China kasoo jeeda ayaa doonaya in kooxda ay kusoo celiyaan awoodii ay horey ulaheyd.
Si kastaba, kooxda Chelsea, Arsenal iyo Man CIty ayaa Perisic u arka saxiix muhiim ah kadib markii uu 27 jirkaan qaab ciyaareed aan caadi aheyn kusoo bandhigay horyaalka Italy.
Tababaraha Chelsea ayaa doonaya inuu xidigan ka dhigto badalka Diego Costa, halka Michy Batshuayi uu isna ku dhibtoonayo kooxda koobaad.
Laakiin Wargeyska Gazzetta dello Sport ayaa tabinaya in macalin Conte uu tartan xoogan kala kulmayo kooxaha Manchester United iyo Liverpool, kuwaas oo sidoo kale baadi goobaya saxiixa wiilkan reer Croatia.
Perisic ayaa labo gool udhaliyay kooxdiisa kulan ay 8-dii bishan ka badiyeen Udinese halka uu sidoo kale daqiiqadihii danbe ee ciyaarta uu gool soo daahay guul ugu hogaamiyay Inter markaas oo ay ka badiyieen Chievo todobaadkii hore.
Xidigan ayaa kooxda Wolsfburg uga soo tagay lacag dhan £13.5million sanadkii 2015, Inter ayaana ku faraxsan iney faa’ido badan ka hesho hadii uu ciyaaryahankan tagayo, laakiin ay ubaahan yihiin badalkiisa.
Dhanka kale Kooxda Inter ayaa si lama filaan ah loola xariirinayaa weeraryahanka Arsenal ee Sanchez.
Xidiga reer Chili ayaa ilaa haatan aanan heshiis cusub usaxiixin kooxdiisa, waxaana ay Arsenal ku qabsan tahay iney lacag badan ku hesho si uusan bilaash uga tagin 18 bilood kadib.
Si kastaba waxaa ay saxiixa Sanchez tartan xoogan kala kulmeysaa naadiga Juventus taas oo dooneysa iney Arsenal kaga badalato Sanchez saxiixa kubad sameeyaa Pjanic.
Dhanka kale Aguero ayaa bed u ah kooxda Inter Milan xidigan reer Argentine ayaana la filayaa inuu ka tago naadiga macalin Klopp uu hogaamiyo.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/inter-milan-oo-city-chelsea-arsenal-ka-afduuneysa-aguero-costa-sanchez-xili-persic-uu-ku-biirayo-koox-london-ka-dhisan/">Inter Milan oo City, Chelsea & Arsenal ka afduuneysa Aguero, Costa & Sanchez Xili Persic uu ku biirayo Koox London ka dhisan</a>